Ahoana no ahitako ny teny tsara indrindra amin'ny teny malaza amin'ny Amazon?
Ny fametrahana ny fifantohana tsara sy ny fikosehana ny teny fanalahidy mety tsara indrindra ho an'i Amazon dia angamba ny zavatra manan-danja indrindra amin'ny fanaovana raharaham-barotra iray manontolo. Ny zava-misy dia ny fikarohana lalindalina lalindalina kokoa dia ny fiantraikany mivantana ny fivarotana anao. Satria fotsiny hoe ny mpanjifa rehetra dia afaka mividy sy mividy miaraka aminao ihany - raha toa ka hita eo amin'ny fijerena fikarohana ny toerana misy anao. Na izany na tsy izany, midika izany fa tsy maintsy mandalo amin'ny fikarohana lalindalina ny teny fikarohana momba ny fikarohana ianao, ka manao zavatra amin'ny ankapobeny amin'ny manaraka: 1)
Fantaro mazava tsara ny algorithm amin'ny alàlan'ny fikarohana A9
Fantaro ny fomba hamoahana fahafaha-manao vokatra vaovao sy teny miafina miafina ho an'ny Amazon
Ampiasao ny volan'ny fikarohana isam-bolana mba hamaritana sy hametrahana ireo teny manan-danja indrindra
Mitadiava fikarohana momba ny vokatra lavabe amin'ny ankapobeny ampiasain'ireo mpivarotra mivantana mividy an-tserasera
Mifantoka bebe kokoa amin'ny fikarakarana teny tokana tokana ho an'ny Amazon Seller Central (. K. ny - pagina web gratis con mysql.
Ary avelao hiatrika izany indray - raha toa ka tsy hita ao amin'ny pejy roa na telo ao amin'ny lisitry ny SERPs ny Amazon, dia tsy maintsy mamerina haingana ireo olona voafaritra tsara Mitadiava fanontaniana mba hahatonga azy ireo hanatratra ny tanjonao. Amin'izany fomba izany, ity misy dingana fohy amin'ny toromarika torolalana ho anao hitantana ireo teny manan-danja indrindra ho an'ny Amazon product listing optimization ny fomba tsara.
Dingana voalohany: Karakarao ny voan-kazo
Aza kendrenao ny fotoanao sy ny ezaka amin'ny fianarana ny tolotra / vokatra azonao amin'ny vokatra kinendry mba hamenana ny fahatakarany ny lafiny fototra amin'ny fampiharana sy ny fampiasana isan'andro. Mety ho toy ny tsy misy mpitaingina izy io, fa ny teboka tena marina, satria tsy misy ny endri-javatra na ny tsipiriany madinidinika mety hitarika ho amin'ny fanafoanana ampahany marim-pototra amin'ny mpanjifanao mety aminao.Raha lazaina amin'ny teny hafa dia ataovy eo amin'ny kiran'ny mpividy, ary araho akaiky ny fitadiavam-bola tsara indrindra ampiasain'ny mpifaninana amin'ny sokajinao / sokajy.
Dingana faharoa: Fikarakarana tsotra sy madio
Ity fotoana ity raha hividy fitaovana fikarohana tsara fototra na sehatra an-tserasera manokana mifanaraka amin'ny endrika lisitry ny tenimiafina voafantina ho an'i Amazon. Amin'izany, aza manadino fa ny fangataham-kaonty fanontanian'i Amélie sy ny tanjom-pifanakalozan-jokiny indrindra dia ilaina ihany koa. Ary ataovy azo antoka aloha ny lisitra misy anao, mifototra amin'ny habetsahan'ny fikarohana, ny isan'ireo fifaninanana, ary ny fividianana tanjona.
Dingana fahatelo: Fadio ny fandikana ny tandro-mainty
Ary ankehitriny izao dia izao no fotoana hikarohana ny lisitra mainty hoditra anao mba hahatonga azy ireo hikendrena kokoa. Tadidio fa ny avo indrindra dia ny habetsaky ny karoka fikarohana iray, ny sarotra kokoa dia ny hamaritra azy. Izany no mahatonga ny fifamoivoizana ambony kokoa ary noho izany dia mety hampitombo ny fihenam-bidy, tsy maintsy mamaritra ireo teny fikarohana ianao ary manafoana ireo izay manana fifaninanana tafahoatra. Tandremo ny teny mavesatra indrindra amin'ny teny lava - ary vita ianao.